यस्ता आँखा हुनेसँग सधै बच्नुस्
मार्च 11, 2017 नोभेम्बर 15, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment आँखा, सधै बच्नुस्
यस्ता आँखा हुनेसँग सधै बच्नुस् ! आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो जुन दृष्टिको काममा आँउछ। भनिन्छ जो कसैलाई पनि आँखामा गहिरो गरी हेर्यो भने सम्पूर्ण ब्यक्तित्व आँखाबाटै बुझ्न सकिन्छ । भनिन्छ आँखा मनको ऐना हो । समुन्द्र शास्त्रमा अनुसार आँखाको बनौटबाट नै ब्यक्तिको गुण दोष थाहा पाउन सकिन्छ । भनिन्छ एकै नजरमा माया बस्यो तर नजर लगाउने आँखामै केहि स्वार्थ लुकेको बुझ्न नसक्दा जीवनमा धेरै धोका खाई पछुताउनुपर्ने पनि हुन सक्छ सावधान ! त्यसैले आँखाको प्रकृतिको पहिचान हुनु अत्यन्त जरुरी छ । थाहा पाई राखौ यस्ता आँखा हुने एकदम खतरा हुन सक्छन सधै बच्नुस् यस्तासंग ।
निला आँखा सुन्दर मानिए तापनि सुन्दर आँखाको पछि नलाग्नुस् । निला आँखा भएका ब्यक्ति निक्कै चलाख हुन्छन् र विश्वास गर्दा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ किनकी यिनीहरु विश्वास तोड्न कुनै वार कुर्दैनन् । आफ्नो स्वार्थ पुर्ति भयो भने यिनीहरु जोसुकैलाई पनि धोखा दिन पछि पर्दैनन् ।
काला र गोला आँखा
काला र गोला आँखा हुने ब्यक्तिसँग पनि बँच्नु राम्रो हुन्छ किनकी उनीहरुको आँखा मात्र होइन स्वभाव पनि साँपको जस्तो हुन्छ । काला र गोला आँखा हुनेहरुले मौका मिल्ना साथ फाइदा लिई हाल्छन ।
साना आँखा हुने ब्यक्तिमा साहसको कमि भई सोंच्ने दायरमा पनि एकदमै साँघुरो हुनाले आफ्नो फाइदालाई अधिक महत्व दिदै अरुप्रति साहनुभुति कम देखाउने स्वभावका हुन्छन ।
← मोटोपन घटाउने घरेलु उपाय
विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन् →
जनवरी 6, 2015 डिसेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक
One thought on “यस्ता आँखा हुनेसँग सधै बच्नुस्”
Pingback: होशियार रहनुहोस यस्ता आँखा हुनेले धोका दिन्छन्